Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra amin'ny 2022
Lonely Planet androany dia nanambara ny firenena 10 ambony indrindra, tanàna ary faritra hotsidihina amin'ny taona manaraka miaraka amin'ny famoahana ny Lonely Planet's Best in Travel 2022.
Ny tsara indrindra amin'ny Travel 2022 dia ny fanangonana faha-17 an'ny Lonely Planet isan-taona amin'ireo toerana mafana indrindra eran-tany sy ireo traikefa tsy maintsy ananana amin'ny taona ho avy. Ity andiany ity dia manome lanja manokana ny traikefa fitsangatsanganana maharitra tsara indrindra - miantoka fa hisy fiantraikany tsara ny mpandeha na aiza na aiza halehany.
Lavitra sy mahaleo tena feno fireharehana ny Nosy Cook – iray amin'ireo firenena kely indrindra eran-tany – dia milaza fa ilay toerana notsiriritina ho firenena laharana voalohany hotadiavina amin'ny 2022, raha i Norvezy no laharana faharoa ary Maorisy fahatelo.
Ny faritra voalohany an'ny Lonely Planet ho an'ny taona 2022 dia ny Westfjords, Islandy, faritra iray ao amin'ny firenena nosy tsy tratran'ny fizahan-tany faobe izay iarahan'ny vondrom-piarahamonina miaro sy mampiroborobo ny tontolony mahavariana. West Virginia, Etazonia no laharana faharoa, arahin’i Xingshuabanna, Shina.
Ny tanànan'i Auckland, Nouvelle Zélande, laharana voalohany dia fantatra noho ny sehatra ara-kolontsaina mivelatra izay misongadina amin'ny famoronana eo an-toerana, raha ny Taipei, Taiwan no laharana faharoa, miaraka amin'i Freiburg, Alemana eo amin'ny laharana fahatelo.
Isan-taona, ny lisitry ny Lonely Planet's Best in Travel dia manomboka amin'ny fanendrena avy amin'ny vondron'olona mpiasan'ny Lonely Planet, mpanoratra, bilaogera, mpiara-miombon'antoka amin'ny famoahana sy ny maro hafa. Ny fanendrena avy eo dia fehezin'ireo manam-pahaizana momba ny diantsika any amin'ny firenena 10, faritra 10 ary tanàna 10 fotsiny. Ny tsirairay dia nofantenana noho ny lohahevitra, ny traikefany manokana, ny anton'ny 'wow' ary ny fanoloran-tenany amin'ny fomba fizahan-tany maharitra.
Araka ny voalazan'ny VP of Experience an'i Lonely Planet Tom Hall dia tsy mety ho ara-potoana kokoa ny famoahana ny “lisitra mafana” isan-taona an'i Lonely Planet momba ny toerana sy ny traikefan'ny dia. "Taorian'ny fiatoana an-tery, tonga ny fotoana hanesorana ireo drafitry ny dia nahemotra ela eny amin'ny talantalana ary hanao izany ho zava-misy," hoy i Hall tamin'ny famoahana ny lisitra androany.
"Ny lisitra dia mankalaza an'izao tontolo izao amin'ny karazan-javamaniry mahafinaritra rehetra," hoy i Hall nanohy. “Hatrany amin'ireo farihy sy alan'ny Nosy Cook ka hatrany amin'ny riandrano sy tendrombohitra any Westfjords any Islandy, amin'ny alalan'ny zavaboary voajanahary sy an-tanàn-dehibe any Auckland.”
Toy ny mahazatra, ny Lonely Planet's Best in Travel dia manolotra toerana vaovao any amin'ny toerana malaza toa an'i Norvezy sy Dublin, Irlandy, ary mamoaka vatosoa tsy dia fantatra loatra toa an'i Shikoku, Japon ary ny Scenic Rim tsara tarehy any Aostralia ary azo lazaina fa tanàna maharitra indrindra any Alemaina, Freiburg.
Lonely Planet's tsara indrindra amin'ny dia 2022 – Toerana 10 ambony indrindra
Firenena 10 ambony
1. Nosy Cook
Faritra 10 ambony
1. Westfjords, Islandy
2. West Virginia, Etazonia
7. Efitr'i Atacama, Chile
8. The Scenic Rim, Aostralia
9. Nosy Vancouver, Kanada
10. Bourgogne, Frantsa
Tanàna 10 ambony
1. Auckland, Nouvelle Zélande
3. Freiburg, Alemaina
4. Atlanta, Etazonia
5. Lagos, Nizeria
6. Nicosia/Lefkosia, Sipra
7. Dublin, Irlandy
10. Gyeongju, Korea Atsimo
Oktobra 29, 2021 ao amin'ny 12: 02